အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်စရာကောင်းလာပြီး အမူအယာလေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ အာဘွိုင်း –7Day Daily News
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အချစ်တွေနဲ့ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေပြီး ချစ်စရာသမီးလေးတွေနဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို လက်တွဲညီညီ ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ စုံတွဲလေးကတော့ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ စုံတွဲလေးပါပဲ…. ။
ခုဆိုရင် Scarlett လေးအပြင် Jaden လေးကလည်း ထပ်တိုးလာပြီမို့ အရင်ထက်တောင် ပြီးပြည့်စုံနဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေမှာပါ ။ အခုလည်း အာဘွိုင်းက အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ပို့စ်တွေ မျိုးစုံပေးကာ
ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ scarlett လေးရဲ့ ပုံလေးေတွကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ပုံလေးတိုင်းမှာ အရုပ်မလေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် ….။
ခ်စ္လွစြာေသာပရိသတ္ႀကီးေရ အႏုပညာေလာကမွာ ပရိသတ္အခ်စ္ေတြနဲ႕ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနၿပီး ခ်စ္စရာသမီးေလးေတြနဲ႕အတူ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စရာ မိသားစုဘဝေလးကို လက္တြဲညီညီ ပိုင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနတဲ့ စုံတြဲေလးကေတာ့ အာဘြိုင္းနဲ႕ ျမတ္ရတနာေက်ာ္တို႔ စုံတြဲေလးပါပဲ…. ။
ခုဆိုရင္ Scarlett ေလးအျပင္ Jaden ေလးကလည္း ထပ္တိုးလာၿပီမို႔ အရင္ထက္ေတာင္ ၿပီးျပည့္စုံနဲ႕ မိသားစုေလးကို ပိုင္ဆိုင္ေနမွာပါ ။ အခုလည္း အာဘြိုင္းက အသည္းယားစရာေကာင္းလြန္းတဲ့ပို႔စ္ေတြ မ်ိဳးစုံေပးကာ
ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနတဲ့ scarlett ေလးရဲ႕ ပုံေလးေ တြကို ေဝမွ်လာပါတယ္ ။ ပုံေလးတိုင္းမွာ အ႐ုပ္မေလးတစ္ေယာက္လို ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းေနတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ ….။